IHanami - Isiko laseJapan Okufanele Uphile Kanye Ekuphileni Kwakho | Ukuhamba kwe-Absolut
Uyazi ukuthi kusho ukuthini I-Hanami? Asibuzi ngencazelo yegama uqobo lwalo, kepha ngayo yonke into eliyifanekiselayo. Nokho, ngaphambi kokuba ucabange ngakho, ake ngikutshele ukuthi kufanele siye eJapane ukuze siqonde kancane ngalesi siko esihle esiqoqwa ngegama elilodwa.
Sivele sinayo indawo futhi isizathu yizimbali. Ngakho izihlahla ze-cherry zifika ngokushesha engqondweni. Yebo, imbali ye-cherry ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu, eyaziwa nangokuthi sakura lapho isihlahla se-cherry siqhakaza. Yebo, bayingxenye yeHanami, isiko esizoveza kulo zonke izimfihlo zalo namuhla.
1 Kuyini hanami
2 Isiko elinjengaleli livelaphi?
3 Singabona nini lo mbukiso wezimbali
4 Izindawo zendabuko zokugubha iHanami
Singayichaza njenge- isiko laseJapan. Vele, kungenye yezintandokazi nezilandelwa kakhulu. Njengoba iqukethe ukujabulela nokubona ukuthi izihlahla ze-cherry ziqhakaza kanjani. Lokho wukuthi, luhlobo lwesiko lapho wonke umuntu eya ezindaweni ezithile ukuze abone ubuhle balo. Lobu buhle bususelwa eqinisweni lokuthi isiqhakaza se-cherry sivele futhi sesimboze idolobha lonke ngengubo yalo ebomvu. Ngokuqinisekile yisikhathi esihle ngempela, ukufaka imibala emigwaqweni nasemapaki ngobumnandi obedlulele. Ngakho-ke sekuyisikhathi esihle.
Isiko elinjengaleli livelaphi?
Kumele kuthiwe ihlehlela emuva eminyakeni eminingi edlule. Njengoba ngaso sonke isikhathi lapho izimbali zikhula ezihlahleni, lowo mzuzu ubuzokhomba ukuqala kwentwasahlobo njengoba wonke umuntu azi. Kepha hhayi lokho kuphela kodwa futhi bekuyinkomba yokuthi inkathi yokutshala irayisi. Ngaphezu kokukhombisa isikhathi esithile kungakapheli unyaka, kufanele kuthiwe lezi zinhlobo zezihlahla zazithathwa njengezingcwele.
Njengoba babekholelwa ukuthi onkulunkulu bahlala ngaphakathi kwabo. Ngakho-ke, lapho kufika ukuqala kokuvuna futhi kwakusezimbali, kwahunyushwa ngokuthi onkulunkulu babenakile ukusiza isivuno sibe sihle. Ngakho-ke, umlando wenkolo kuthiwa uyisisekelo sokuqala se- isiko le-hanami. Ukufika kwentwasahlobo kodwa nokwehla konkulunkulu emhlabeni, ngohlobo losizo.
Kepha kuyiqiniso ukuthi kancane kancane wayeka ukuthatha isisekelo senkolo futhi kukhona nabantu abaningi abahlobene ne- ama-samurai. Lokho kusho ukuthi, ukumelwa kokukwazi ukufa usengubudala bokuphila. Ngaphezu kwalokho, kunenganekwane ethi ekuqaleni izimbali zazimhlophe, kepha kancane kancane zazingcoliswa yigazi lamaqhawe futhi zathatha umbala obomvana esaziyo.
Singabona nini lo mbukiso wezimbali
Kuthiwa vele ekupheleni kukaFebhuwari izimbali zokuqala ziqala ukuhluma. Kancane kancane kuze kube nguMeyi kuzoba nenqubekela phambili endaweni ngayinye yezwe. Njengoba bezoqala ukubonakala endaweni eseningizimu kancane kancane bazokhuphukela enyakatho, okuzoba ngabokugcina ukubona lo mbukiso. Yize indawo ehlala ine-scoop njalo isiqhingi se-okinawa, ngoba ekuqaleni kukaMashi uzobe usuvele unezimbali ze-cherry. Ngokungafani neHokkaido, okuzoba enye indawo ephikisayo, ngoba kuze kube sekuqaleni kukaMeyi abazobe begubha leli siko. Kwesinye isikhathi siyamangala ukuthi kungabonakala kuqhakaza ngisho nasekupheleni kukaJanuwari, yize kungavamisile ukwenzeka kakhulu.
Izindawo zendabuko zokugubha iHanami
Yize lezi zihlahla sezivele zihlala ezingxenyeni eziningi zezwe, kuhlala kunezindawo ezivakashelwa kakhulu. Abanye babo yibo I-Ueno Park eTokyo noma eKyoto iHeian Shrine noma iKamogawa. Ngenkathi ise-Osaka iphuzu elibalulekile ligxile eCastle Park naseNara, futhi nasesiqiwini esinegama lakhe. Ngakolunye uhlangothi, eHokkaido sineGoryokaku Castle Park nase-Okinawa, iNakijin Castle.
Vele, namhlanje iphathi liletha wonke umuntu ndawonye emapaki ahlukene noma ezintabeni nasezindaweni lapho ungathola khona isihlahla se-cherry, esikhona kuwo wonke amakhona. Ngaphezu kwesiko, sekuyiphathi enkulu lapho abahlangana khona badle futhi baphuze kuze kushone ilanga. Ngakho manje kumnandi kakhulu kunokucabanga. Noma kunjalo, wonke umuntu ubungaza ukuthi bazungezwe umoya oyingqayizivele, ombozwe ngengubo enhle futhi egcwele amasiko kanye nezinganekwane. Uma nje idlula, le mithi ihlala ingcwele.
Ngakho-ke, kufanele uye kwenye yalezi zindawo, ubeke isikhala sakho ukuze ukwazi ukuhlala ngokukhululeka emapaki, ujabulele intambama noma usuku lonke lapho. Okuhlangenwe nakho kuhlukile futhi kuyaphumula. Kwesinye isikhathi ungabaleka edolobheni futhi ujabulele imvelo ethe xaxa noma osebeni lomfula. Yiba ngangokunokwenzeka, into esemqoka ukuyiphila okungenani kanye empilweni yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Hanami
Izinhlamvu zamagama nokubhala kweGrisi lasendulo